कोरोनाभाइरस: नेपालमा सङ्क्रमित भेटिएपछि सचेत रहन सरकारको निर्देशन - BBC News नेपाली
Image caption वुहानस्थित अस्पताल
चीनमा कम्तीमा ४१ जनाको ज्यान लिइसकेको कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण एक नेपालीमा भेटिएको पुष्टि भएसँगै नेपालमा थप सतर्कता अपनाइएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
शनिवार बिहान बसेको बैठकले काठमाण्डूका सबै अस्पतालहरूलाई सतर्क अवस्थामा रहन र आइसोलेशन वार्ड बनाएर तीन दिन भित्र योजना पेस गर्न अस्पतालहरूलाई निर्देशन दिइएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ।
काठमाण्डूस्थित मुलुकको एक मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चीनबाट आएकाहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न र आवश्यक परेको अवस्थामा त्यहीँबाट अस्पताल लैजान एम्बुलेन्स तयारी अवस्थामा राख्ने कार्य भइसकेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
चीनमा नयाँ वर्ष तथा वसन्त पर्वको छुट्टी सुरु भएका कारण यो बेला चीनमा पढ्न गएका नेपालीहरू नेपाल फर्कने गर्छन्।
चीनले यति छिटो अस्पताल कसरी बनाउन सक्छ
कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण फैलँदै गएपछि विभिन्न चिनियाँ सहरहरूमा रहेका नेपालीहरू समेत नेपाल फर्किरहेका विवरणहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्।
शुक्रवार स्वास्थ्य मन्त्रालयले चीनको वुहानबाट हालै फर्केका एक नेपाली विद्यार्थीमा सङ्क्रमण देखिएको बताएको थियो। तर ती व्यक्ति हाल निको भएर घर फर्किसकेको बताइएको छ। उनको परिचय खुलाइएको छैन।
त्यसबाहेक शाङ्घाइ शहरबाट केही समयअघि नेपाल आइपुगेका एकजना नेपालीमा पनि कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण भएको आशङ्का गरिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
उनलाई हाल शुक्रराज ट्रोपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा छुट्टै कोठामा राखिएको छ।
कति छ क्षमता?
अधिकारीहरूका अनुसार विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले कोरोनाभाइरस भएको आशङ्का गरिएकाहरूलाई एक्लै राखेर परीक्षण गर्नुपर्ने बताएको छ।
त्यसबाहेक सङ्क्रमित भएको पुष्टि भएको अवस्थामा ती व्यक्तिको बाक्लो हेलमेल भएका व्यक्तिहरूलाई पनि उच्च निगरानीमा राख्न सुझाइएको बताइएको छ।
चीनमा रहेका नेपालीहरू नेपाल आउने समय भएकाले र सङ्क्रमणको आशङ्का गरिएकाहरूसँग हेलमेल भएकाहरूलाई समेत हेर्नुपर्ने हुँदा नेपालको जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित पूर्वाधारले त्यसलाई धान्न सक्छ कि सक्दैनन् भन्ने विषय पेचिलो हुँदै गएको बताइएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठका अनुसार हाललाई सरकारले कोरोनाभाइरस सङ्क्रमितलाई राख्न भनेर तीन वटा अस्पताल तोकेको छ।
एक नम्बरमा शुक्रराज ट्रोपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, दोस्रोमा पाटन अस्पताल र तेस्रो सशस्त्र प्रहरी बलको अस्पताल राखिएको उनले जानकारी दिए।
तस्वीर कपीराइट stidh.gov.np
एक्लै राखेर उपचार गर्नका लागि भने हाल १० वटा मात्रै कोठा रहेको अधिकारीहरूको भनाई छ। छ वटा कोठा टेकुमा र बाँकि चार पाटन अस्पतालमा तयार पारिएको बताइएको छ। सशस्त्रमा भने यो समाचार तयार पारुन्जेल कोठा छुट्याइनसकेको बताइएको छ।
"विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले नेपाललाई मध्यम स्तरको सतर्कता अपनाउन भनेको छ। त्यसै अनुरूप काम गरिरहेका छौँ। स्थिति अनुसार योजना पनि परिमार्जन हुँदै जानेछ," श्रेष्ठले भने।
थल मार्गमा के छ अवस्था?
हालसम्म चीनसँगको नाकामा सरकारले कुनै पनि किसिमको सतर्कता अपनाई नसकेको अधिकारीहरू बताउँछन्।
श्रेष्ठका अनुसार केरुङ नाकामा सतर्कता बढाउने योजना भने मन्त्रालयले बनाएको छ।
"थल नाकाबाट मानिसहरू कम आउँछन्। अर्को कुरा वुहानदेखि रेलमै चढेर केरुङ आउँछु भने पनि तीन दिन लाग्छ," उनले भने।
"तिब्बतमा कोरोनाभाइरसको जोखिम हाल सम्म देखिएको छैन।"
कोरोनाभाइरसको लक्षणहरू कस्ता हुन्छन्?
कोरोनाभाइरस: नेपाल जोखिममा छ?
कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण भएपछि ज्वरो आउँछ र त्यसपछि सुक्खा खोकी लाग्छ। केही हप्तापछि सास फेर्न गाह्रो हुन्छ र केही बिरामीलाई अस्पताल लैजाने अवस्था आउँछ।
तर कैयौँ अवस्थामा यस्ता लक्षण नदेखिएका बिरामीमा पनि यसको सङ्क्रमण भेटिने गरेको विज्ञहरू बताउँछन्।
तर यो सङ्क्रमण सार्सको सङ्क्रमण जति गम्भीर प्रकृतिको नहुने उनको भनाइ छ।
यो कति घातक छ?
कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमणका कारण अहिलेसम्म ४१ जनाको ज्यान गएको छ। त्यो भनेको जम्मा सङ्क्रमितको करिब तीन प्रतिशत मात्रै हो।
तर यो सङ्क्रमण प्राणघातक बन्न केही समय लाग्ने भएकोले ज्यान जानेको सङ्ख्या अझै बढ्ने भय व्यक्त भइरहेको छ।
अहिले सम्म १ हजार २ सय ८७ जना सङ्क्रमित भएका विवरण प्राप्त भएका छन्।
चिकित्सकहरूले थाहै नपाएको सङ्क्रमण कति छ भन्ने अझै प्रष्ट भइसकेको छैन।